Posts tagged Jaceylkii Horre iyo Kan Maanta Jira!
Dunida aynu kuwada nool nahay waxa ay soomartay marxalado aad ukala duwan, midkastaana waxa uu watay waayihiisa, arrinkasta oo dhacana waxaa jirtay qaab iyo xeelad lagu maarayn jiray, laguna xalin jiray. Waayo waayo iyo heerar kala duwan ayuu soomaray jacaylka, inkasto ay dadyawga dunida ku kala nooli ay ku kala duwanaayeen xagga dhaqanka. Soomaaliyana wajiyo kala duwan ayuu ku soomaray iyadoo waliba intii koonkaan jirayba waxaa xaqiiq ah in uu jiray jacayl, waana mid ku uunnaa ummadkasta qalbiyadooda. Laga soobilaabo xilligii dunidaan la abuuray, aadanaha lagu sharaxay ilaa Xaawo iyo Aadan jacaylku wuu jiray marxalad kasta ha soomaree. Marka …